Yiba Ukuthengiswa kwakhona kwe-Soldering-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Inkqubo ye-Reflow Soldering yinkqubo ebalulekileyo yokufumana umgangatho omhle we-solder.Umatshini wokuthengisa we-Fumax reflow une-10 temp.indawo.Silinganisa iqondo lokushisa.yonke imihla ukuqinisekisa iqondo lokushisa elichanekileyo.
Ukuphinda kufakwe i-soldering
I-Reflow soldering ibhekiselele kulawulo lokufudumeza ukunyibilika kwe-solder ukuphumeza ukudibanisa okusisigxina phakathi kwezinto ze-elektroniki kunye nebhodi yesekethe.Kukho iindlela ezahlukeneyo zokufudumeza ukuthengiswa, ezifana ne-ovens reflow, izibane zokufudumala kwe-infrared okanye imipu yomoya oshushu.
Kwiminyaka yakutshanje, ngophuhliso lweemveliso ze-elektroniki kwicala lobungakanani obuncinci, ubunzima bokukhanya kunye noxinzelelo oluphezulu, i-reflow soldering kufuneka ijongane nemingeni emikhulu.I-Reflow soldering iyafuneka ukuba yamkele iindlela zokudlulisa ubushushu ezihambele phambili ngakumbi ukuphumeza ukonga amandla, ubushushu obufanayo, kwaye bufanelekele iimfuno ezintsonkothileyo ezikhulayo ze-soldering.
(1) Iqondo lobushushu elikhulu, kulula ukulawula ijika lobushushu.
(2) I-solder paste ingasasazwa ngokuchanekileyo, kunye namaxesha amancinci okufudumeza kunye nethuba elincinane lokuxutywa kunye nokungcola.
(3) Ifanelekile ukuthengisela zonke iintlobo zezinto ezichanekileyo ezichanekileyo kunye nemfuno ephezulu.
(4) Inkqubo elula kunye nomgangatho ophezulu wokuthengisela.
2. Ukulungiselela imveliso
Okokuqala, i-solder paste iprintwe ngokuchanekileyo kwibhodi nganye ngokusebenzisa i-solder paste mold.
Okwesibini, icandelo libekwe ebhodini ngumatshini we-SMT.
Kuphela emva kokuba la malungiselelo elungiselelwe ngokupheleleyo, i-reflow soldering yangempela iqala.
I-Reflow soldering ifanelekile kwi-SMT, kwaye isebenza ngomatshini we-SMT.Xa amacandelo afakwe kwibhodi yesiphaluka, i-soldering kufuneka igqitywe ngokufudumeza kwakhona.
4. Umthamo wethu: Iiseti ezi-4
(2) I-Reflow soldering sele ine-solder phambi kwesithando somlilo, kwaye kuphela i-solder paste inyibilika eziko ukwenza i-solder joint;I-wave soldering yenziwa ngaphandle kwe-solder phambi kwesithando somlilo, kwaye ithengiswa kwiziko.
(3) Ukuphinda kufakwe i-solder: ubushushu obuphezulu bomoya bubumba i-reflow soldering kumacandelo;I-Wave soldering: I-solder etyhidiweyo ifom ye-solder edibeneyo kwizinto.
Ibhodi yeSekethe eprintiweyo IPcb enamacala amabini IRigidFlex Pcb IPcb Fabrication kunye neNdibano Odm PCba IFlex PC